ICubot KingKong 5 Pro ifikelela kwimarike yaseSpain nge-121,62 euro | I-Androidsis
ICubot KingKong 5 Pro isungulwe ngeentsuku ezi-3 zokubonelelwa nge-44% nge-121,62
UManuel Ramirez | 29/03/2021 17:00 | IsiTshayina Android, Iiselfowuni
Ukuba ubulindele ithuba lokufumana iselfowuni entsha nge-Android 11 kunye nebhetri enkulu, ungaya ukufumana iCubot KingKong 5 Pro nge- € 121,62 kwisibonelelo esikhethekileyo Qalisa.
Iselfowuni yomhlaba wonke eyilelwe ukumelana nobume obugqithisileyo kwaye okweentsuku ezimbalwa, ngokuchanekileyo kude kube ngu-Epreli 2, ungayifumana njengoko incitshisiwe nge-44% kwixabiso layo. Isivumelwano ngesixhobo esiziphatha ngokugqibeleleyo kwaye sinayo i-Android 11 onokuyonwabela ngayo eyona nto iphambili kwi-Android.
1 Iselfowuni yokuqala ehamba kunye nexabiso eliphantsi le-Android 11
2 Iinkcukacha zakho zobugcisa
3 Unikezelo lweentsuku ezi-3 nge-44%
Iselfowuni yokuqala ehamba kunye nexabiso eliphantsi le-Android 11
Le Cubot KingKong 5 Pro, kunye esele sikuxelele ngaye kungekudala, inokubhengezwa ngokugqibeleleyo njenge iselfowuni yokuqala enexabiso eliphantsi nge-Android 11 Kwaye loo € 121,62 sisilingo ekunzima ukusithi hayi, kwaye ngakumbi xa sisazi zonke iinkcukacha zayo.
Kwaye sithetha ngenye yeefowuni ezivela eAsia ezingaswelekanga kwiimpawu kwaye eziza kusothusa ngokugqibelela kwazo. Sinebhetri ebanzi efikelela kwi-8.000mAh ibhetri, izithethi ezibini zestereo Esona sandi silungileyo, ukumelana ne-IP68 kunye ne-IP69K emanzini nothuli, kunye nekhamera kathathu edibeneyo yokuba nefoto njengenye yeereferensi zayo.
Ewe kunjalo, sijamelene neselfowuni ezenza ngathi ayixhathisi, kunjalo uyilo lwayo luhamba kunye ukuze lukwazi ukujongana nezo ndawo kunye neemeko apho sifuna khona izinto ezizibambayo.
Iinkcukacha zakho zobugcisa
Njengoko besitshilo, i ICubot KingKong 5 Pro ine-8.000mAh ibhetri, Izithethi ezibini zestiriyo, i-IP 68 kunye ne-IP69K yokumelana nekhamera kathathu njengeempawu eziphambili, kodwa kuninzi okungafanele ukuba sikuphose.
Ngokubhekisele kwimemori yangaphakathi kunye ne-RAM, i ICubot KingKong 5 Pro ifikelela kwi-64GB yokuqala kunye ne-4GB yesibini. Isikrini sale fowuni sifikelela kwii-intshi ezi-6 ngesisombululo se-HD (masingalindeli izigqibo eziphezulu apha kwaye kwenye indawo kukho ixabiso ...) kunye nekhamera yaphambi kwesikrini esihlala kwi-25MP yelensi ephethe ii-selfies kunye neefowuni zevidiyo.
Enye into ebalulekileyo kule fowuni intsha yeCubot esungulwe namhlanje yikhamera yayo kathathu ene Iilensi eziphambili ze-48MP, 5Mp yeelensi ezinkulu, Kunye ne-0,3MP njengenye yeelensi ezinemifanekiso.
Sinokudwelisa ezinye iimpawu ezingabalulekanga kangako, kodwa ngokubanzi ezongeza kuluhlu olufanelekileyo, ezinje zii-NFC, GPS, GLONASS, BEIDU kunye ne-Android 11 (Nangona le inomdla kuthi kakhulu). Inentambo ye-C yohlobo C, ukukwazi ukwandisa imemori yangaphakathi nge-Micro-SD ukuya kuthi ga kwi-256GB, i-OTG, i-ID yobuso kunye neBluetooth 5.0.
Ke ngokwemiqathango ngokubanzi kunye nexabiso elibonelelweyo kwezi ntsuku, kunjalo Imfono elula kakhulu ngexabiso eliphantsi onokuyifumana namhlanje.
Unikezelo lweentsuku ezi-3 nge-44%
ICubot KingKong 5 Pro isungulwe namhlanje kwaye ibekwe kwintengiso ngehliso le-44%, ke ungayithenga ngexabiso elikhethekileyo le- $ 121,62, ke ukuba ubugcinele ukulinda ukumiliselwa kwefowuni yolu hlobo, mhlawumbi lixesha lokuba uye kwisibonelelo sabo esikhethekileyo kwiAliexpress.
ICubot KingKong 5 Pro ekhethekileyo - Qhagamshela kwi- € 121,62
Eli xabiso liyafumaneka kwangolo suku lwanamhlanje kude kube ngu-Epreli 2, emva koko iya kubuyela kwixabiso layo eliqhelekileyo kwaye ihlala kwi-euro ezingama-217,19 kwaye akukho kubi konke konke xa kubalwa ukucaciswa kwayo kunye nenjongo yayo ephambili; kwaye ayisiyonto ngaphandle kokuxhathisa kwaye singathatha iCubot siye nayo entabeni, elunxwemeni okanye naphina apho sifuna khona ngaphandle koloyiko lokuba ingawa kwaye iphele amandla ayo kwiintsuku ezi-2 zebhetri kunye ne-geolocation.
Iselfowuni apho Singasola ukuba ayinazo iimodeli zemibala eyahlukileyo, Kodwa kungenjalo iba lukhetho olukhethekileyo kuye nabani na othanda ukuziqhelanisa nemidlalo egqithileyo, ubugcisa bakhe buhamba kwiindawo ezinzima okanye ufuna nje ukuba neselfowuni yesibini kwimeko apho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IsiTshayina Android » ICubot KingKong 5 Pro isungulwe ngeentsuku ezi-3 zokubonelelwa nge-44% nge-121,62
Xiaomi Mi 11: Uhlalutyo, iimpawu kunye novavanyo lwekhamera